विद्यालय खोल्ने हतारो जोखिम बढाउने कदम: स्वास्थ्य मन्त्रालय
भाद्र १७, २०७८ बिहिबार 56
कोभिड महामारीकैबीच विद्यालय खोल्ने क्रम बढेको छ । संक्रमण दर कम हुँदै गएको र सिकाइको वैकल्पिक माध्यम प्रभावकारी नभएको भन्दै स्थानीय तहले धमाधम विद्यालय खुलाउन थालेका हुन् । प्रशासन समेत लचिलो हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने बालबालिकामा संक्रमण दर बढ्दो क्रममा रहेकाले विद्यालय खोल्ने हतारोलाई जोखिम बढाउने कदम भनेको छ ।
काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको निर्णय अनुसार आरुबारीस्थित अरुणोदय माध्यमिक विद्यालयले भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन थालेको छ । एक हजार विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयले बुधबारदेखि पठनपाठन थालेको हो । उसले शिक्षक विद्यार्थीलाई मास्क अनिवार्य गर्नुका साथै साबुनपानीले हात धुने व्यवस्था गरेको छ ।
तर कक्षा कोठामा सामाजिक दूरीको नियम पालना हुन सकेको छैन । विद्यार्थी डेढ वर्षपछि विद्यालयमा उपस्थित भएका हुन् । लामो समयपछि विद्यालयमा उपस्थित भएर पढ्न पाउँदा विद्यार्थी खुशी त छन्, तर उनीहरुमा कोभिड सर्ने डर पनि छ ।
Prevदु’खद खबर : खो’लाले ब’गाउ’दा दीदी बहिनी सं’गै ज्या”न ग’यो !
Nextमिर्गौला दान गर्न नेपालमा सर्वोच्च अदालतले ल्याइदियो नयाँ नियम, अब यस्ता ब्याक्तिले पनि दिन पाउने !
स्मारिका ढकाल र विवेक अधिकारीले गरे डिभोर्स
आमाबुवा रातभर मोबाइलमा व्य’स्त, ओ’छ्यान’बाट ख’सेर १९ म’हिने छो’रीको मृ”त्यु’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ पहाडी जिल्लाको बिधुत र टेलिफोन सेवा पूर्णरुपमा अवरुद्ध”